Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kokudla oketshezi - iHielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonic pasteurization inqubo engeyona yokushisa yokuvimbela ama-microbes afana no-E. Coli, Pseudomonas fluorescens, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus coagulans, Anoxybacillus flavithermus phakathi kwabanye abaningi ukuvimbela ukonakala kwama-microbial nokuthola ukomelela kokudla isikhathi eside.
Ukunamathela Okungashisi Okushisayo Kokudla & Iziphuzo nge-Sonication
I-Ultrasonic pasteurization ubuchwepheshe obungebona obushisayo obusetshenziselwa ukubhubhisa noma ukuvimbela izinto eziphilayo kanye nama-enzyme anikela ekonakaleni kokudla. I-Ultrasonication ingasetshenziselwa ukugcoba ukudla okusemathinini, ubisi, ubisi, amaqanda, amajusi, iziphuzo ezinokuqukethwe kotshwala obuncane, nokunye ukudla oketshezi. I-Ultrasonication iyodwa kanye ne-ultrasound ehlanganiswe nezimo eziphakeme zokushisa nezingcindezi (ezaziwa ngokuthi i-thermo-mano-sonication) inganciphisa kahle ijusi, ubisi, ubisi, amaqanda amanzi kanye neminye imikhiqizo yokudla. Ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kwe-ultrasonic pasteurization kudlula amasu wendabuko we-pasteurization njengoba i-ultrasound ingakuthinti kabi okuqukethwe kokudla okunomsoco nezimpawu zomzimba zemikhiqizo yokudla okuphathwayo. Usebenzisa i-ultrasound noma i-thermo-mano-sonication ukuze unamathisele imikhiqizo yokudla oketshezi kunganikeza umkhiqizo ocebile ngomsoco onekhwalithi ephezulu kunendlela yendabuko yokushisa okushisayo (i-HTST) yendabuko.
Izifundo zocwaningo ezifana neBeslar et al. (2015) ithole ukuthi ukwelashwa kwe-ultrasonic kunganikeza izinzuzo ezibalulekile ekucutshungweni kwamajusi kufaka phakathi izinto ezithuthukisiwe zekhwalithi, njengokuvunwa, ukukhishwa, amafu, izakhiwo ze-rheological, nombala kanye nempilo yeshalofu.
I-Ultrasonic pasteurization iyindlela engeyona eyokushisa ukuze kungasebenzi amagciwane ekudleni okungamanzi. Ngenxa yesilinganiso sokushisa esiphansi sokucubungula, izakhamzimba nokunambitheka kuvinjelwe ekuqhekekeni kokushisa. Ngaleyo ndlela, i-ultrasonic pasteurization iholela kumikhiqizo yokudla esezingeni eliphakeme.
Amajika okusinda e-Escherichia coli (a) kanye ne-Staphylococcus aureus (b) kujusi we-aphula ngemuva kwe-Ultrasound Treatment (UT) emazingeni okushisa ahlukene nangemva kwe-Heat Treatment (HT) emazingeni okushisa afanayo.
isithombe nokutadisha: Baboli et al. 2015
Isebenza Kanjani i-Ultrasonic Pasteurization?
Ukungasebenzi kwe-Ultrasonic nokubhujiswa kwamagciwane kuyindlela engeyona eyokushisa, okusho ukuthi isimiso sayo sokusebenza esiyinhloko asisekelwe ekushiseni. I-Ultrasonic pasteurization ibangelwa ikakhulu yimiphumela ye-acoustic cavitation. Isimo se-acoustic / ultrasonic cavitation saziwa ngamazinga okushisa aphezulu asendaweni, izingcindezi, nokwehluka okuhlukile, okwenzeka ngaphakathi nangaseduze kwamabhamuza e-cavitation amaminithi. Ngaphezu kwalokho, i-acoustic cavitation yakha amandla amakhulu okushefa, izindiza eziwuketshezi neziyaluyalu. Le mikhosi ebhubhisayo idala umonakalo omkhulu kumaseli we-microbial, ukuwohloka kwamangqamuzana nokuphazamiseka. Ukugcotshwa kwamaseli nokuphazamiseka yimiphumela eyingqayizivele etholakala kumaseli aphathwe nge-ultrasonically abangelwa kakhulu amajetshi ketshezi akhiqizwa yi-cavitation.
I-Ultrasonic pasteurization isuselwa ku-acoustic cavitation kanye namandla ayo e-shear hydrodynamic
Kungani i-Sonication Idlula Ukuncishiswa Kwendabuko
Umkhakha wezokudla neziphuzo usebenzisa ukunambitheka okuvamile kabanzi ukuze kungasebenzi noma kubulale amagciwane afana namagciwane, imvubelo nesikhunta ukuvimbela ukonakala kwamagciwane nokunikeza imikhiqizo yawo ithala elide nokuphila. I-pasteurization ejwayelekile isebenza ngokwelashwa okufishane emazingeni okushisa aphakeme kaningi angaphansi kuka-100 ° C (212 ° F). Izinga lokushisa eliqondile nobude besikhathi eside kuvamise ukulungiswa kumkhiqizo wokudla othize kanye namagciwane, okumele kungasebenzi. Ukusebenza kwenqubo yokunamathisela kunqunywa isilinganiso sokusebenza kwe-microbial, esikalwa njengokuncishiswa kwelogi. Ukwehliswa kwelogi kukala iphesenti lamagciwane angasetshenziswanga ezingeni lokushisa elithile esikhathini esithile. Izimo zokwelashwa ngamazinga okushisa kanye nezinga lokungasebenzi kwamagciwane kuthonywa uhlobo lwama-microbes kanye nokwakheka komkhiqizo wokudla. I-pasteurization yendabuko esuselwa ekushiseni inezinto ezimbalwa ezingathandeki ezisukela ekungasebenzi kahle kwe-microbial, imiphumela emibi kumkhiqizo wokudla kanye nokushisa okungalingani ngomkhiqizo ophathwayo. Ukushisa okunganele ngokuthatha isikhathi esifushane se-pasteurization noma izinga lokushisa eliphansi kakhulu kuholela kunani eliphansi lokuncipha kwelogi kanye nokonakala okuncane kwe-microbial. Ukwelashwa okushisa ngokweqile kungadala ukonakala komkhiqizo njengama-flavour ashile, kanye nokuxinana okuncane kwezakhi zomzimba ngenxa yezakhi zomzimba ezizwela ukushisa.
Ububi bePasteurization Ejwayelekile
kungabhubhisa noma kulimaze izakhi zomzimba ezibalulekile
izidingo zamandla aphezulu
ayisebenzi ekulweni nokubulala amagciwane amelana nokushisa
ayisebenzi kuwo wonke umkhiqizo wokudla
I UIP16000 iyi-homogenizer yezimboni egcwele ngokugcwele yezimboni yokugcotshwa okusemgqeni kokudla neziphuzo.
I-Ultrasonic Pasteurization Yobisi
I-Sonication, i-thermo-sonication ne-thermo-mano-sonication habve icwaningwe kabanzi ngokuncishiswa kwemikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi. Isibonelo, i-ultrasound kwatholakala ukuthi iqeda ukonakala kanye nama-pathogen angavela abe yi-zero noma emazingeni amukelwa umthetho wobisi waseNingizimu Afrika nowaseBrithani, noma ngabe imithwalo yokuqala ye-inoculum engu-5 × ngaphezulu kunokuvunyelwa yayikhona ngaphambi kokwelashwa. Ukubalwa kwamaseli okusebenzayo kwe-E.coli kwehliswe ngo-100% ngemuva kwe-10.0 min ye-ultrasonication. Ngaphezu kwalokho kukhonjisiwe ukuthi izibalo ezisebenzayo zePseudomonas fluorescens zehliswe ngo-100% ngemuva kwemizuzu engu-6.0 kwathi iListeria monocytogenes yehliswa ngama-99% ngemuva kwe-10.0 min. (UCameron et al. 2009)
Ucwaningo luphinde lwabonisa ukuthi i-thermo-sonication ingavimbela ama-Listeria innocua nama-mesophilic bacteria kubisi oluhlaza lonke. I-Ultrasound ikhonjiswe njengobuchwepheshe obusebenzayo bokuncishiswa kokudla kanye nokwenziwa kobisi kube homogenization, kukhombisa izikhathi zokucubungula ezimfushane ngaphandle kwezinguquko ezibalulekile kokuqukethwe kwe-pH ne-lactic acid, kanye nokubukeka okungcono nokufana uma kuqhathaniswa nokwelashwa okuvamile okushisayo. La maqiniso alusizo ezicini eziningi zokucubungula ubisi. (UBermúdez-Aguirre et al. 2009)
I-Ultrasonic Pasteurization yamaJusi nezithelo ze-Purees
I-Ultrasonic pasteurization isetshenziswe njengenqubo esebenzisekayo futhi esheshayo yokuncamathelisa ukuze kungasebenzi i-Escherichia coli neStaphylococcus aureus kujusi we-apula. Lapho ujusi wama-apula wamahhala ucutshungulwa nge-ultrasonically, isikhathi sokunciphisa amalogi ama-5 sasingu-35 s se-E. Coli ku-60degC nama-30 s se-S. aureus ku-62degC. Yize ocwaningweni kutholakale ukuthi okuqukethwe uginindela okuphezulu kwenza i-ultrasound ingabulali kangako kuS. Aureus, ngenkathi ingenamphumela omkhulu ku-E. Coli, kufanele kuqashelwe ukuthi akukho kucindezelwa okusetshenzisiwe. I-Sonication ngaphansi kwengcindezi ephakeme iqinisa kakhulu i-ultrasonic cavitation futhi ngaleyo ndlela i-microbial inactivation in more viscous liquids. Ukwelashwa kwe-Ultrasound akubanga nomthelela omkhulu emsebenzini we-antioxidant onqunywe yi-2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) yomsebenzi omkhulu wokuhlwitha, kepha kukhulise kakhulu okuqukethwe okuphelele kwe-phenolic. Ukwelashwa kuphinde kwaholela kujusi ozinzile ngokufana okuphezulu. (bheka uBaboli et al. 2020)
Ukwenza kwe-Ultrasonic kwe-Gram-Positive kanye ne-Gram-Negative Bacteria
Ama-bacterium amahle we-Gram, njenge-Listeria monocytogenes noma i-Staphylococcus aureus, aziwa ngokujwayelekile ukuthi amelana kakhulu nama-bacteria angenayo i-gram-negative futhi amelana nobuchwepheshe be-pasteurization obufana ne-PEF, HPP kanye ne-mano-sonication (MS) isikhathi eside sokwelashwa ngenxa yeseli elijiyile izindonga. Amagciwane angenayo i-Gram angenawo amabili – i-cytoplasmic eyodwa yangaphandle neyodwa – ulwelwesi lwe-lipid cell olunongqimba oluncane lwe-peptidoglycan phakathi kwabo, okubenza babe sengozini enkulu yokungasebenzi kwe-ultrasonic. Ngakolunye uhlangothi, amagciwane ane-gram ane-membrane eyodwa kuphela ye-lipid enodonga lwe-peptidoglycan olujiyile, olubanikeza ukumelana ngokwengeziwe nemithi yokwelashwa. Uphenyo lwesayensi luqhathanise umthelela wamandla we-ultrasound kuma-bacterium we-gram-negative ne-gram-positive futhi lwathola ukuthi lunamandla okuvimbela ama-bacteria angenayo i-gram-negative. (cf. Monsen et al. 2009) Amagciwane ane-Gram-positive adinga izimo ze-ultrasound ezinamandla kakhulu, okusho ukuthi ama-amplitudes aphakeme, amazinga okushisa aphezulu, izingcindezi eziphakeme kanye / noma isikhathi eside sonication. Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'zamandla-ultrasound zingaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi zingaqhutshwa emazingeni okushisa aphakeme nangama-reactor cell-flow pressure. Lokhu kuvumela i-sonication / thermo-mano-sonication enamandla kakhulu ukuze kusebenze izingqinamba zamagciwane amelana kakhulu.
Ukwenza kwe-Ultrasonic kwe-Thermoduric Bacteria
Ama-bacterium e-Thermoduric amabhaktheriya angasinda, ngokuya ngokuhlukahluka, inqubo yokunamathisela. Izinhlobo ze-Thermoduric zamagciwane zifaka iBacillus, Clostridium ne-Enterococci. “I-Ultrasonication engama-80% amplitude ngemizuzu eyi-10 kodwa, ivuselele amaseli we-B. coagulans kanye no-A. Ukwelashwa okuhlangene kwe-pasteurization (ama-63 degrees C / 30 min) kulandelwa i-ultrasonication kususwe ngokuphelele cishe i-log 6 cfu / mL yalamaseli obisini olushelelayo. ” (UKhanal et al. 2014)
Izinzuzo ze-Ultrasonic neThermo-Mano-Sonication Pasteurization
Ibulala amagciwane we-thermoduric
Isebenza ngempumelelo ngokumelene namagciwane ahlukahlukene
Kusebenza kokudla ketshezi okuningi
Imishini ebanga ukudla
Isethaphu ye-Ultrasonic I-UIP4000hdT okwe-non-thermal inline pasteurization kwemikhiqizo yokudla (isb., ubisi, ubisi, amajusi, iqanda eliwuketshezi, iziphuzo)
Izinsiza kusebenza ze-Ultrasonic Pasteurization Equipment
I-Hielscher Ultrasonics inesipiliyoni eside ekusetshenzisweni kwamandla e-ultrasound ekudleni & imboni yeziphuzo kanye namanye amagatsha amaningi ezimboni. Amaprosesa ethu e-ultrasonic afakwe ama-sonotrode nama-flow-cells (izingxenye ezimanzi) okulula ukuwahlanza (i-clean-in-place CIP / sterilize-in-place SIP). I-Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ama-amplitudes aphezulu abalulekile ukuvimbela amagciwane amelana kakhudlwana (isib., Amagremu ane-gram-positive). Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Onke ama-sonotrode ne-ultrasonic flow cell reactors angasetshenziswa ngaphansi kwamazinga okushisa aphezulu nezingcindezi, ezivumela i-thermo-mano-sonication ethembekile kanye ne-pasteurization esebenza kahle kakhulu.
Ubuchwepheshe besimanje, ukusebenza okuphezulu kanye nesoftware eyinkimbinkimbi kwenza iHielscher Ultrasonics’ umsebenzi wamahhashi onokwethenjelwa kulayini wakho wokudla. Ngenyawo elincane kanye nezinketho zokufaka ezinhlobonhlobo, ama-Hielscher ultrasonicators angahlanganiswa kalula noma afakwe kabusha emigqeni ekhona yokukhiqiza.
Sicela uxhumane nathi ukuthi ufunde kabanzi mayelana nezici namandla wezinhlelo zethu ze-ultrasonic pasteurization. Singajabula ukuxoxa nawe ngesicelo sakho!
Yini ama-Mesophilic Bacteria?
Amagciwane kaMesophilic achaza iqembu lamagciwane akhula emazingeni okushisa alinganiselayo aphakathi kuka-20 ° C no-45 ° C futhi anezinga lokushisa elifanele kahle ebangeni elingama-30-39 ° C. Izibonelo zama-bacterium mesophilic E. coli, Propionibacterium freudenreichii, P. acidipropionici, P. jensenii, P. thoenii, P. cyclohexanicum, P. microaerophilum, Lactobacillus plantarum phakathi kwamanye amaningi
Amagciwane akhetha amazinga okushisa aphezulu, aziwa njenge-thermophilic. Ama-bacterium e-Thermophilic abila kangcono uma engaphezulu kuka-30 ° C.